Kindergartens | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
chengetedza shoko kune izwi VOICES dzinoda kutarisa wechipiri O. kumirira mhinduro ...
izwi rekuyedza izwi VOICE unoda kutarisa wechipiri O. wakamirira mhinduro ... Iri harisi izwi rekuyedza. Mazwi mazhinji anowanikwa mudimikira mumakirasi ekutanga sekusagadzikika, zvirizvo ...
Nzira yekugadzirisa sei basa rekomiti yemubereki muchekecheji?
Nzira yekugadzirisa sei basa rekomiti yemubereki muchekecheji? Zuva rakanaka! Ndapota dzidzai nechinzvimbo chevabereki vekomiti mukerekeji. 1. Mabasa uye zviri mubasa. Komiti yemubereki iri kusikwa ku ...
ndiudzei ndapota nhetembo, nziyo dzemaoko
Ndapota ndiudzei nhetembo, nziyo dzemaoko Maoko eamai vanozvininipisa, vanofukidza muchindwe nechanza, Maoko ane rugare ari patafura. ...
Rondedzera nzvimbo yekuvandudza chaiyo mwana, maererano nedzidziso dzeL. S. Vygotsky
Rondedzera nzvimbo yakakonzerwa nekugadzirwa kwemwana, maererano nedzidziso dzaL. S. Vygotsky. Dai iwe uzarura Vygotsky uye uverenge chinyorwa, unodzidza kubva kunzwa here? The zone of proximal development level of development achieved by a child in ...
Ndiudzei chinyorwa pfupi chetsano
Ndiudzei chinyorwa pfupi chetsano. Ndakanga ndiripo, mudiwa, ndinwa doro. Masecheche akayerera, asi haana kuwira mumuromo make. Nokukurumidza nyaya yacho inobatwa, asi haina kuitwa nokukurumidza. . Pasina kutaura ...
Kushanda nguva kubva kuhuwandu uye kusvika kune zvakadini chikoro chekugadzirira chikoro ???
Kushanda nguva kubva kuhuwandu uye kusvika kune zvakadini chikoro chekugadzirira chikoro ??? Vatungamiri vane hurongwa hwebasa. Kazhinji munda unoshanda ne 8 ku 19 kana ne 7 ku 18. Uno ...
Tsanangura Paunoita chero kudzidza, mapoka maviri anosarudzwa. Boka rekuedza rinosanganisira vana vanoitwa naro basa kuti riumbe chinhu vachishandisa chero nzira dzakatarwa. Mukutonga - vana avo vakadaro ...
Batsira kunyora nyaya shoma pamusoro pegogo kumwana muchechi yeklasi
Batsira kunyora nyaya diki pamusoro paambuya vemwana mune kindergarten .. Hi, ini ... ini ndine ambuya. Zita raE ... Ini ndinoda chaizvo! Paanosvika anogara achiuya nezvipo, ...
Ndinonyatsoda ndima pamusoro pemhepo!
Ini ndinonyatsoda vhesi pamusoro pemhepo! Mhepo yakachena yevana .. Inodiwa uye inobatsira! Zvakawanda zvinonakidza kuti isu tifambe! Uye hapana hosha! ... naOksanochka Krynina Breath Ini unomuka ndichiyerera ziya ziya ndinomuka mu ...
Kanda zvirevo nemashoko pamusoro pemiriwo nezvibereko zvegoroke.
Kanda zvirevo nemashoko pamusoro pemiriwo nezvibereko zvegoroke. Miti yose ine nguva yayo Onion kubva pane zvinomwe zvirwere Zvose zvinomera zvine nguva. (Chirevo cheRussia) Zvinotora nguva yakareba kurondedzera ...
Kukurumidzira vanoda zvipfeko!
Kukurumidzira vanoda zvipfeko! Apo chipanje chisingazivi, Hachibatsiri, hachigari, ndinotora basa rangu: Ndinodonha zvitsitsinho, ndinosvina zvidzitiro zvangu nesipo uye ndinobvisa mabvi angu, handikanganwi chinhu. (Bast) Eraser ...
Nditaurire, ndapota, ndiudze zuva rega rega muchidyiro! Kwemakore mangani mwana akaendeswa kumucheche uye chii chaanofanira kuita iye pachake?
Ndapota ndiudzewo maitiro ezuva nezuva ari muchidyiro! Sezvo mwana anga aine makore mangani kuendeswa kuharare uye chii chaanofanira kukwanisa kuzviita? Pane STANDARD REGULATION YEMABASA PRESCANET DZIDZO YEMABHUKU, iyo inoti: "Preschool dzidzo ...
Mabhuku eboka riri pakati pegerereji
Mabhuku epakati repakati peiyo chekecheke Karl Marx "Capital" Bvunza mudzidzisi mune chekisheni "Dzidzo uye dzidzo chirongwa". Ikoko kwezera rega rega reboka pane rondedzero yekunyepedzera: nhetembo, ngano, ...
ndiani anobatsirwa kubva kuchikoro chekoroji?
ndiani anobatsirwa kubva kuchikoro chekoroji? Vana vane hurema (vana vane urema neine zvakakodzera rubatsiro) vanoenda kuharareji yekusununguka, 50% inobhadharwa kuchengetwa kwevana kubva kumhuri huru ...
Uye akaparadzaniswa muzvibvumirano: gnome, nyoka, perch
Uye kugoverwa muzvinyorwa: gnome, nyoka, ganda, nyoka-ini, o-kun. shandisa imwe syllable nyoka-I-maviri o-kun shanduro mbiri sezvo pane dzakawanda vowel inzwi mune rimwe shoko uye kuti sei mashandiseti muzwi izwi vowel ...
uyo anoziva kuti honye zvipi
ndiani anoziva chinonzi honye Kubva kubva pazera re6 - 7 mwedzi, mwana anotanga kushingairira kudzidza nyika yakapoterera kwete chete neayo mitezo inonzwa, senge maziso, kunzwa, kunhuhwirira, kuravira kunzwa, asiwo ...
Nzira yekuita sei pakurwisana kwevana yekusika?
Nzira yekuita sei pakurwisana kwevana yekusika? Ndinobvuma: Musoro we MBDOU __________ Zita remamiriro ekukwikwidzana kwemabasa ekugadzira semuenzaniso Inonyanya kuvhara Hats Zvinyorwa Zvikamu Kupikisana kwezvisikwa Zvekugadzirisa Hondo yepakutanga ...
Chii chinoongorora rospotrebnadzor mu kindergartens?
Chii chinoongorora rospotrebnadzor mu kindergartens? Iwe unogona kunge wakavhiringidzika, izvi hazvirevi kutarisa kwevatengi veRussia, asi kutarisa kwekuRussia kwekudzidzisa. SanPin kutevedzera. Kuchengetedza mapepa ose, kunyora mabhuku, maitiro ekudzidzisa, maitiro ...
Nhetembo dzakanaka pamusoro pemutauro wekutaura. Kunyanya kudiwa kwazvo! Share. ndapota !!!
Nhetembo dzakanaka pamusoro peanodzidzisa kutaura. Zvinonyanya kudiwa !!! Goveranai. ndapota !!! Kushivirira uye kugona, kutsungirira uye kukunda - Aya ndiwo matanho makuru ari pabasa remurapi wekutaura. Vese Nadi, Vani, Viti Vanofanira kutaura, ...
Sirikidzi ye mudzidzisi wegereji. Mitemo yekuderedza.
Sanimum yemudzidzisi mu kindergarten. Zvirevo zvekusakwana. ) Heino SanPiN nyowani ye2013. Kugadziriswa kweMutungamiriri weNyika Sangency Chiremba weRussia Federation yaMay 15 2013 N 26 Moscow ye "Pakubvumirwa ...
Mibvunzo ye56 mu database yakagadzirwa mu 0,458 masekondi.